မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအပူပေးစက်နှင့်အတူ induction အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction အပူ / induction အပူတံဆိပ်ခတ်
အမျိုးအစား: induction အပူ Tags: အပူတံဆိပ်ခတ်, မြင့်မားသောအကြိမ်ရေအပူတံဆိပ်ခတ်, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတံဆိပ်ခတ်, သော induction အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်း, အပူတံဆိပ်ခတ် induction, induction တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, induction အပူတံဆိပ်ခတ်
အမြင့်ကြိမ်နှုန်း induction အပူပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အတူ induction အပူတံဆိပျ
induction အပူ အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၏အိုးပေါ်မှာလူမီနီယံအဖုံးပိတျထားသောတစ်ခုကြော့နည်းလမ်းများပေးပါသည်။ အဆိုပါ induction အပူတံဆိပျ ထုပ်ပိုးနည်းလမ်းတမ်ပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထုတ်ကုန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အာမခံထား။ အဆိုပါလူမီနီယံရုပ်ရှင်၏ induction အပူအိုးတလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်အတွက်အဖုံး၏ဘေးထွက်သက်ရောက်သောတံဆိပ်ခတ်ထုတ်ကုန်၏အပူချိန်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤသည်အပူ 0.5s မှ 1.5 များအတွက်အဖုံးမှလျှောက်ထားဖိအားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဖန်ခွက်, ကတ်ထူပြားများနှင့်ပလတ်စတစ် (PE, PP, PVC ... ): ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကွန်တိန်နာအပေါငျးတို့သပုံစံမျိုးစုံနှင့်အပါအဝင်ပစ္စည်းများကို၏ကျယ်ပြန့များအတွက်လျှောက်ထားသည်။
အားလုံးကိစ္စများတွင်အဆိုပါ inductors နှင့်အဖုံးအကြားမျှအဆက်အသွယ်လည်းမရှိ။ ဒီအားသာချက်အပြင်, အခုအသစ်နည်းလမ်းကို ပို. ပို. အသုံးပြုပါသည်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်:
■အဆိုပါ induction အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းလမ်းမြို့ပတ်ရထား, ဘဲဥပုံအဘို့သုံးနိုင်တယ်,
အစိုင်အခဲပြည်နယ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု. နှင့်မျှမရှိတယ်
ကျနော်တို့၏အတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ induction အပူတံဆိပျ စနစ်များ:
One-ခြေလှမ်း induction အပူတံဆိပ်ခတ်■။
encapsulation တွေကိုသေချာမတိုင်မီအဆက်မပြတ်သော induction အပူတံဆိပ်ခတ်■။
encapsulation တွေကိုသေချာမတိုင်မီတည်ငြိမ်သောသော induction အပူတံဆိပ်ခတ်■။
catalytic converter ၏အဆုံးမှာအပူ induction
သော induction အပူ rivets
အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ဘို့ induction အပူကြေးနီဝါယာကြိုး
ချောင်းတွေ, Billets ၏ induction အပူအဆုံး, ဘား